सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? के छ कानुनी व्यवस्था ? – Sidha Onlinepatra
टिकटकमा भाइरल ७ बर्षिय बुढी आमाको बुवाआमा र दिदी मिडियामा, परिवार नै यति धेरै रमाइलो(भिडियो )
मुख्य पृष्ठ /News/सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? के छ कानुनी व्यवस्था ?
सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? के छ कानुनी व्यवस्था ?
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा नेपालको परिमार्जित नक्सा अनुमोदन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि नै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले यसको विरोध गर्दै आएकी छिन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा संशोधन पनि दर्ता गराएकी थिइन् । यद्यपि सभामुखले यो संशोधन प्रस्ताव नियमअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिए ।
सांसद गिरीले निरन्तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग नभएको दावी गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले आफूले यी क्षेत्र नेपालभित्र कहिल्यै पनि नदेखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएकी थिइन् । पार्टीले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूले दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेकी गिरीले प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा यस विषयमा बोल्न चाहेकी थिइन् । तर, सभामुखले बोल्न नदिएपछि उनी बैठक छाडेर बाहिरिइन् ।
पछिल्लो समय सरिता गिरीले यस विषयमा पटक पटक भारतको पक्षमा बोल्न थालेपछि उनीविरुद्ध धेरैले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कैयौंले उनलाई सांसद पदबाटै हटाउन माग गरेका छन् । के उनलाई सांसद पदबाटै हटाउन मिल्छ ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा नरहने वा पद रिक्त हुने बारे संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८७ र ८९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८७ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यता र धारा ८९ मा पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धमरा ८७ मा लेखिएको छ –
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
यस्तै धारा ८९ मा लेखिएको छ –
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उनलाई पार्टीले चाहेमा सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि यसको लागि पार्टीले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनको पार्टीले उनलाई कारवाही गरेर पार्टीको सदस्यबाट निष्काशन गर्ने हो भने उनको सांसद पद बहाल रहने छैन । किनकि त्यो अवस्थामा उनी पार्टीको सदस्य रहने छैनन् र धारा ८९ को (ङ) अनुसार पार्टीले उनले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा उनको पद बहाल रहने छैन ।
तर, उनलाई निष्काशन गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध उनले कानुनी उपचार खोज्न भने पाउनेछिन् । यसरी उनले कानुनी उपचार खोज्दा दलले उनलाई गरेको कारवाही उचित नदेखिएमा भने उनलाई निष्काशन गर्ने पार्टीको निर्णय बदर हुनेछ र उनको सांसद पद कायमै रहनेछ । दलको कारवाही गर्ने निर्णय उचित देखिएमा भने उनको पद जान सक्छ ।
पार्टीले निष्काशन गरेकै अवस्थामा पनि सांसद गिरीले सांसद पद कायमै राख्न सक्ने अर्को विकल्प पनि छ । यसका लागि उनले आफू अहिले जुन पार्टीको तर्फबाट सांसद छिन् त्यो पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले पार्टी विभाजन गर्दा राजनैतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसारका सांसद र केन्द्रीय सदस्य भने आफ्नो पक्षमा लिन सक्नुपर्छ । यदि उनले आवश्यक सांसद र केन्द्रीय सदस्य साथमा लिएर पार्टी विभाजन गर्न सकिन् भने उनी नयाँ पार्टीको तर्फबाट सांसद रहनेछिन् । यसरी पार्टी विभाजन गर्नको लागि उनको साथमा पार्टीका ४०–४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ ।
दुई दिन देखि बढेरहेको सुनको भाऊ नसोचेको तरिकाले घट्यो , तोलाको कति ?
अब विदेश जाने व्यक्तिको कोरोना परीक्षण यी तीन अस्पतालबाट हुने
सिड्नीमा नेपाली विद्यार्थीबीच ‘ग्याङफाइट’, एकको मृत्यु